Soosaaraha Nooca Gawaarida Shiinaha iyo Soo-saare | Xinneng
Jiidida: iyadoo la adeegsanayo jillaab mobiil ah, 360 ° u leexan kara, isteerinka dabacsan, hubi socodka socda.
Xayiraadda: bareega: isla mar ahaantaana lagu xakameynayo nidaamka jejebinta ShouYaoShi iyo isku xirnaanta jejebiinta, hubi badbaadada wadista.
Bolster: si loo hubiyo xasilloonida hawlgalka gawaarida korontada ku shaqeysa, oo leh afar qalab oo keliya oo gacan siiya farsamo ama Haydarooliga.
Albaabada & daaqadaha: hore waxay leedahay hawo hawo leh oo daaqada ka baxsan, albaabada, labo dhinac oo ay ka howlgalaan shaqaalaha ka howlgala.
Albaabada & daaqadaha: hore waxay leedahay hawo hawo hawo leh oo ka baxsan daaqadda, albaabada, laba dhinac oo ay ku shaqeeyaan shaqaalaha ka hawlgala.
Laydhka: jirridda ku jirta nuugida laambad sare, midig ayaa leh shey shaqo, waxaana ku qalabeysan laambad miis shaqo, shaqaale ku habboon.
Caddaynta codka: korantada gawaarida gawaarida, albaabka si loo sugo dhammaan isticmaalka qurxinta laba-laabka ah, iyo qalab lagu xardho qalabka wax lagu duubo oo la xakameynayo, xajmiga mawduuca, qaab dhismeedka istiraatiijiga ah, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo. A) gudahood.
Dab-demiska: qalabka dab-bakhtiiyeyaasha waxaa lagu qalabeeyaa laba.
Qalabka matoorrada nooca loo yaqaan 'trailer trailer' wuxuu leeyahay naqshad gaar ah oo casri ah, dhaq-dhaqaaqa sare, xarunta culeyska oo hooseeya, bareeg aamin ah, muuqaal si fiican loo soo saaray iyo muuqaal qurux badan. Isticmaalka xulashada noodhka qaabdhismeedka ganaaxa guga guga waa macquul, xoog sare, iyo adkaansho wanaagsan. Rugta korontadu way fududahay in la dhaqaaqo, way dabacsan tahay in la shaqeeyo, waxayna leedahay hawo-qabasho iyo badbaado wanaagsan. Waxa kale oo ku qalabeysan biriiga gacanta, bareega hawada, nalka gadaal gadaashiisa iyo nidaamyo kale, kuwaas oo buuxiya shuruudaha wadista wadada weyn. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa goobaha dhismaha, wadada weyn, dhismaha tareenada iyo meelaha ku meel gaarka ah ee korantada loo isticmaalo.
1. Qaab dhismeedka ganaaxa guga; ku qalabaysan bareeg baabuur dhigasho (bareeg gacanta) iyo bareega hawada oo ku xiran cagaf-cagaf;
2. Qalabka koronto-dhaliyaha ee loo yaqaan 'generator generator' wuxuu qaadanayaa qaab-qaboojiye nooca-birta loo jaro, kaas oo ku habboon cagaf cagafyo dhaadheer oo kala duwan, xagallo waaweyn oo rogrogmo leh iyo dhaqdhaqaaq sare;
3. Afarta gees ee jirku waxay ku rakiban yihiin aalado mashiinka lagu taakuleeyo, trailerku wuxuu leeyahay sagxad hawlgal iyo dayactir ah oo ku yaal sedex dhinac, waxaana jira dabadayaal dabada.
Toction: Waxay qaadataa jillaab dhaqaajin kara, 180 ° u leexan kara, isteerinka jajaban iyo hawlgal habboon.
RaBarke: Isla mar ahaantaana, waxay leedahay isku xirnaanta jejebiye hawadeed oo lagu kalsoon yahay iyo nidaam bareeg gacanta lagu hubiyo nabadgelyada inta lagu jiro wadista.
Sapport: Si loo hubiyo xasilloonida gaariga korontada inta lagu jiro hawlgalka, waxaa lagu qalabeeyaa 4R qalab farsamo ama mashiin ah.
OoQolladaha iyo daaqadaha: waxay leeyihiin daaqado hawo qaadasho xaga hore, albaabada dhinacyada gadaal, iyo albaabada labada dhinac ee wadaha inuu galo oo ka baxo.
Cabbirka Baabuurka: Cabbirka sanduuqa gaariga waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo qeexitaannada. Hawl wadeenku wuu socon karaa, taas oo ku habboon hawlgalka iyo dayactirka.
Muuqaalka: Rinjiga wuxuu qaataa rinjiga polyurethane polymer, midabka ayaa u habeyn kara isticmaalaha, iyo tuubada qiiqa ayaa qaata qiiqa kore ama qiiqa hoose si loo hubiyo muuqaalka quruxda badan. Xuruufta iyo qurxinta banaanka sanduuqa gaariga waxaa lagu sameyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha.
Dab: Laba dab damis ayaa lagu qalabeyn karaa gaariga. (Ikhtiyaar)
Hore: Guddi Qoraxeed
Xiga: Taxanaha Generator Volvo